सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गरिनु उपयुक्त कि अनुपयुक्त ? « News24 : Premium News Channel
सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गरिनु उपयुक्त कि अनुपयुक्त ?
काठमाडौं । चाडवाड नजिकिदै जाँदा प्रहरी कार्यालयहरु दशैं सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्न तल्लिन छन् । पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न अगाडि आएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुले एकपछि अर्को गर्दै दशैं सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । जिल्ला सहित केन्द्रीय प्रहरीले समेत रणनीति सार्वजनिक गर्दा सुरक्षा योजनाको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रहरी परिचालन हुने संख्या, क्षेत्रजस्ता विषय समेत समेटेर योजना सार्वजनिक गर्दा अपराधि सजग हुन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ । तर, प्रहरी अपराधि हतोत्साहित हुने तर्क गर्छ ।
दशैं-तिहार तथा छठसम्म नै चोरी, डकैतीका घटना बढ्ने गर्छन । प्रहरीकै विगतका तथ्यांकले पनि चाडपर्वमा चोरी, डकैतीका घटनामा वृद्धि भएको देखाएको छ । आपराधिक मनोवृत्ति सुरक्षा योजना सार्वजनिक हुँदा हतोत्साहित हुने प्रहरीको दाबी र घटनाको ग्राफको तारतम्य मिलेको छैन । घटनामा कमी होइन वृद्धि भएको देखिएको छ । यसले पनि अपराध कम गर्न प्रहरीको सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्ने रणनीति फेल खाएको देखाएको छ । सधै झैं यो वर्ष पनि नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पार्ने दाबी गर्दै आएको छ । यस वर्ष चाड पर्वलाई मात्र लक्षित गरेर देशभर ३१ हजार ५ सय प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
गोप्य राखिनुपर्ने सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गर्नाले अपराधीले पनि आफ्ना तरिकामा परिवर्तन गर्न सक्छन् । प्रहरीको दाबी जस्तै अपराधिको मनोवल गिराउनभन्दा पनि अपराधको तरिकामा परिवर्तन गर्नका लागि पहिले सजग गराएझैं बन्ने गरेको छ ।